अचम्मकाे जीव जसले सजिलै संग पुर्नजन्म लिन सक्छ -
अचम्मकाे जीव जसले सजिलै संग पुर्नजन्म लिन सक्छ
वैज्ञानिहरुले संसारमा भएका धेरै जिवजन्तु र प्राकृतिक कुराहरूकाे अध्ययन गरेर सफलता हात पारीसकेका छन । पछिल्लाे समयमा बैज्ञानिकहरू एउटा यस्ताे जीवकाे अध्ययन गरीरहेका छन जसले सजिलै सित पुर्नजन्म लिन सक्छ । मैक्सिकन एक्सोलॉटल नामक यो प्राणी मेक्सिकोको झाडीमा पाइन्छ। जुन बिना पानी पनि बाँच्न सक्छ। साधुरणतया छेपाराे जस्ताे देखिने याे जिवले अाफनाे अङगहरू नष्ट हुदै गएपछि विस्तारै सजिलैसंग नयाँ अङगहरू निर्माण गर्न सक्छ। वैज्ञानिकले गरेकाे पछिल्लाे अध्ययन अनुसार , यदि कुनै पनि अङगकाे मासु , हड्डी या नङहरू शरीरबाट छुट्टिएपनि हप्ता दिन भित्रमा यथास्थितिकै ठाउँमा ल्याउन सक्छ ।
वैज्ञानिकहरूले भन्छन् कि एक्सोलॉटलको यदी कुनै पनि हड्डीमा चोट लाग्याे भने उसले याे अाफै निकाे पार्ने क्षमता राख्दछ र यदी हड्डी टुटिहालेमा पनि सामान्य हिसाबले काम गर्न सक्छ । घाउ भएकाे ठाउमा पनि कुनै निशान नछाेडीकन स्व उपचार गर्दछ ।
याे एउटा अजिव खालकाे प्राणी हाे । यसले सामान्य प्रजनन क्षमता राख्दै अाएपनी विस्तारै लाेप हुने अवस्था पुगेकाे भनि वैज्ञानिकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन । तर यसले अत्यधिक प्रजनन क्षमता राख्दछ । बैज्ञानिकहरू याे जीवलार्इ करीब १५० वर्षमा प्रयाेगशालामा यसकाे प्रजनन क्षमताकाे बारेमा विश्लेषण गर्न लागीपरेका छन । याे असाधारण भएकाले यसलार्इ लाेप हुनबाट बचाउा वैज्ञानिकहरूले यस्ताे कदम चालेका हुन ।
वैज्ञानिकहरूको एक अन्तरराष्ट्रीय टोलीले एक्सोलॉटलको अर्को रहस्य पत्ता लगाएका छन । यस जीवमा मानिसकाे भन्दा बढी जीनहरू भेटिएका छ । उक्त अध्ययन अनुसार याे जीवमा ३२ मिलियन डीएनए बेस जोडीहरू छन्, जुन मानव भन्दा दस गुनाले बढी हाे।प्रकृति पत्रिकामा प्रकाशित एउटा अध्ययनअनुसार, “यी खोजहरू ती अंगहरूको पुनरुत्थानमा गहिरो अध्ययन गर्नेहरूलाई महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछन्।”
वैज्ञानिकहरूले यस जीवकाे परीक्षण भइरहेका कक्षहरूलार्इ सुरक्षित राखेका छन । जुन यसकाे अंगहरूका पुनरुत्थान प्रक्रियाको लागि जिम्मेवार छन्।तर कसरी यसले पुर्नजन्म लिन्छ भन्ने कुरा अझै पनि पत्ता लाग्न सकेकाे छैन , यसका लागी जीनहरूकाे गहिराे अध्ययन गर्न अत्यावश्यक हुन्छ । यो जीवकाे शरीरमा३२ मिलियन भन्दा बढी हुनुले नै याे संसारबाट लाेप हुने अवस्थामा पुगेकाे हाे ।
Previous सैफ सुटिङका लागि घर बाहिर गएका बेला एक्लै हुँदा रुन्छिन् करीना !
Next के तपाईको आँखाको वरिपरी चाउरीपना देखिन थालेको छ? अपनाउनुहोस् यी अत्यन्त प्रभावकारी उपाय